HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 9-AUG-2020
Sunday August 09, 2020 - 10:52:03 in Wararka by Mogadishu Times
Golaha Shacabka oo diiday ansixinta Ajendaha kulanka Shalay Xildhibaanada G/Shacabka ayaa diiday ansixinta Ajendaha kulankii Shalay oo ah Ma shruuc sharci oo ah Akhrinta 1aad ee Hind ise sharciyeedka Dambiyada la xiriira Gal mada. Xildhibaan
Golaha Shacabka oo diiday ansixinta Ajendaha kulanka Shalay Xildhibaanada G/Shacabka ayaa diiday ansixinta Ajendaha kulankii Shalay oo ah Ma shruuc sharci oo ah Akhrinta 1aad ee Hind ise sharciyeedka Dambiyada la xiriira Gal mada. Xildhibaan no ka hadlay furitaanka kulanka ayaa si cad u diideen mashruucaan iyaga oo sheegay in uu Diinta Islaamka ka hor imaanayo & dhaq anka Suubban. Waxaa ay sidoo kale sheegay inaan la marsiin karin akhrinta 1aad loona baahan yahay in wax ka badal lagu sameeyo. Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa dalbanaya in laga doodo Arr imaha doorashooyinka. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in Ilaahey SWT uu si cad u caddie yay marka uu ka hadlayay 2da qof ee isku ta geysa, haatan waxaa caalamka ka jira in 2 dumar ah is guursan karaan, sidoo kale 2 rag ahna is guursan karaan. Wuxuu sheegay in diinta Islaamka ay si asluubeysan uga hadleyso 2da qof ee kala ji nsiga ah, wuxuuna hoosta ka xariiqay in ma shruucan la soo min guuriyay. dhinaca kale Xildhibaan C/hi Sh. Ismaac iil oo ka mid ah Xildhibaanada G/Shacabka ayaa sheegay in Sharciga Shalay la horkeen ay baarlamaanka Soomaaliya uu ka soo horj eedo Diinta Islaamka. Waxa uu she egay sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in golaha Shacabka la ilaaliyo Sharaftooda. "Baarlama anka Soomaaliyeed baa haatan Galmo ka doodaya oo la soo ag dhigay waxay dhaaw ac ku tahay Sumcaddiinna guddoomiye iyo kan baarlamaankaba mana ahayn inuu baar lamaanka uu soo gaaro ",Waa Bullaacad kan ee Sharci maahan, Guddoomiye Biyo iyo Bullaacad iyo Wasaq ba haddii aad baarl amaanka ku soo deysaan ilaahay ka Baqee maxaa dhacaya guddoomiye?" ayuu yiri Xil dhibaan C/ahi Sheekh. Sidoo kale Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ow ayaa ka mid ahaa xilibaanada halkaa ka had lay ee diidmada ka muujiyey Ajadahaa. Si kastaba ha ahaatee waxaa iyana hal kaasi ka hadlay Xildhibaano taageeraya muhiimadda ansixinta golaha ee mashruuc aasi, iyagoona aaminsanin xildhibaanadaan inay wax ka tareyso tacadiyada lagula kaco haween ka. Kalfadhigii shalay ee GBFS oo muddo xil eedkiisu ka harsan tahay 3 bilood ayaa mar kii ugu horeysay waxa uu dood adag ka yee shay arrimaha jinsiga iyo galmada oo horay hay'ado kala duwan u doodayeen in la hor umariyo. Waxaana Shirgudoonku shaaciyey in ciddii dooneysa in doodu sii socoto ay im aan karaan xarunta Caawa iyo Habeen danbe isagoo sheegay in shirka uu xiran ya hay gudoomiye ku xigeenka 1aad ee baar lamaanka soomaaiya
Q/Midoobey oo walaac ka muujisay tila abo uu qaaday Gudoomiye Mursal
Q/Midoobey iyo xubnaha kale ee beesha Caalamka ayaa walaac ka muujiyay go’aan ka G/G/Shacabka Maxamed Mursal uu Shal ay Miiska ku saaray Hindise sharciyeedka Dambiyada la xiriira Galmada.
QM waxa ay sheegtay in uus an sax aheyn midka Shalay la horgeeyay , is lamarkaana loo baahan yahay in G/Wasiirad da ay dib u celiyaan. "Q/Midoobay iyo saax iibadeeda kale ee Soomaaliya ayaa u muujiy ey walaaca ay ka qabaan G/G/Shacabka, Maxamed Mursal Sh.Cabdiraxmaan, isku da yga miiska lagu soo saaray sharci cusub oo aan sax aheyn, kaas oo oggolaanaya guur ka carruurta, kana hor imaanaya heshiisya da caalamiga ah ee arrintan la xiriira” ayaa lagu yiri War kasoo baxay Xafiiska Q/M.
Warka ayaa intaasi kusii daray "Xafiis ka QM ee Soomaaliya waxa uu ku boorrinay aa G/wasiirrada ee dalka inay dib-u-soo-celi yaan Hindise-sharciyeedka Dembiyada Gal mada ee asalka ah”
Xildhibaanada G/Sh ayaa diiday ansixin ta Ajendaha kulanka Shalay oo ah Mashruuc sharci oo ah Akhrinta 1aad ee Hindise sharci yeedka Dambiyada la xiriira Galmada.
Xildhibaano ka hadlay furitaanka kulanka ayaa si cad u diiday mashruuc aan iyaga oo sheegay inuu di inta ka hor imaanayo iyo dhaq anka Suuban.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa M/ Muqdi sho kula Kulmay Safiir ku xigeenka D/Talya aniga ee Soomaaliya ambassador Tabio Ma ssimo waxaana ay ka wada hadleen wax ka qabashada Arrimaha Fatahaada Beledwe yne.
Waxaa D/Talyaaniga ay ogolaatay Mash ruuci in dhowaanba la sugayay ee ka horta ga Fatahaada Mashruucaasi oo ay ku baxeyso lix Milyan oo dollar (6,000,000$).
Safiirka ayaa U sheegay Mad axweynaha In